Sina: Mikendry ilay goavambe eo amin’ny teknolojia ny hetsipanentanana manohitra ny votoaty vetaveta · Global Voices teny Malagasy
Tsy mahazo mifampikasoka ara-batana intsony ireo mpandray anjara anaty kilalaon-tsary.
Voadika ny 05 Oktobra 2019 20:16 GMT
I Michelle Fong no nanoratra ity tatitra ity voalohany, izay navoaka tao amin'ny inmediahk.net tamin'ny teny Sinoa ny 26 Aprily 2014. Nadikan'i Jennifer Cheung tamin'ny teny Anglisy izy io ary novain'i Ellery Biddle hanaraka ny endrika fampiasan'ny Global Voices. Amin'ny teny Sinoa avokoa ireo loharano rehetra.
Mikendry ny Sina, izay mitarika eo amin'ny famatsiana Aterineto ary nanampy ny fitondràna hanivana ny fahalalahana miteny anaty aterineto, ny famoretana farany nataon'ny manampahefana Sinoa momba ny sary mamoafady sy ny votoaty vetaveta ao anaty aterineto.
Nanome ny antsipirian'ireo votoaty mamoafadin'ny Sina ireo manampahefana misahana ny fampiharana lalàna, izay hita indrindra anatin'ireo fantsona famakiana sy ireo fandaharana an-dahatsariny, ireo tahan'ny fanindriana votoaty, sy ny vola miditra aterak'izany. Araka ny tatitra dia mikasa ny hanaisotra ny fahazoandàlan'ny Sina hamoaka anaty Aterineto sy ny famelana azy hanaparitaka fandaharana amin'ny haino amanjery.
Hatramin'ny nanombohana ilay hetsipanentanana, nihazona sy nampiato vohikala sy fantsona mamoafady maherin'ny 110, miaraka amin'ireo bilaogy, kaonty WeChat ary sehatra fiadiankevitra maherin'ny 3.300, ireo manampahefan'ny governemanta Sinoa. Nanakana rohy manao dokambarotra mamoafady maherin'ny 7.000 izy ireo, ary namafa fampahalalàna mamoafady maherin'ny 200.000 isa. Ankoatra ny Sina, maherin'ny 20 ireo vohikala momba ny literatiora no voafehy, isan'izany ny Sohu Yuanchuang, ny Huanxia Zhongwenwang, ny Yuelu Xiaoshuowang, ary ny Kanshu Wang.
Mbola afaka mahita ireo dokambarotranà kilalaon-tsary manaitra filàna ihany ny olona ao anaty aterineto, na eo aza io famoretana io. Pikasary avy aminà sehatra fiadian-kevitra Sinoa momba ny kilalaon-tsary anaty.
Nitatitra (rohy maty) ny Southern Metropolis Daily fa nisy orinasa sasany mpamokatra kilalaon-tsary anaty aterineto nampandrenesin'ny manampahefana fa tsy mahazo mampiseho ny faritra fady amin'ny vatana intsony ireo mpandray anjara anaty kilalaon-tsary, na koa manao akanjo fohy tanana, pataloha fohy na koa akanjo fentina milomano amin'ny ho avy. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy tokony hanana fifampikasohana ara-batana intsony, amin'ny endriny rehetra, ireo mpandray anjara fototra na mpanampy, lahy sy vavy.
Nametraka ahiahy amin'ny tena tian'ilay hetsik'ireo manampahefana manohitra ny votoaty mamoafady atao ireo mpampiasa aterineto. Maro amin'ireo teraka tany amin'ny toana 80 sy 90, izay “voakasiky ny fiarovana” ataon'io hetsipanentanana io, no mivazivazy milaza fa “miaina ny Rivopanovàna ara-kolontsaina ihany ry zareo ny farany.”
Nanontany ny antony hikendren'ny governemanta ny Sina fa tsy ireo mpamokatra votoaty mamoafady goavana ireo mpampiasa aterineto sasany. Ireo hafa kosa mino fa ny lazan'ny Weibo, izay sehatra fanoratana bilaogy bitika lehibe indrindra sahanin'ny Sina, no anton'izany. Manana mpampiasa maherin'ny 100 tapitrisa ny Sina Weibo ary anaty lisitry ny azo amidy amin'ny tsenambola any Etazonia. Na dia niara-niasa tamin'ny governemanta Sinoa aza ny Sina hanaraha-maso ny Aterineto, tsy mbola vitany ny misakana ireo mpampiasa aterineto hiala ny sivana sy hanaparitaka vaovao saropady. Maro no miahiahy fa ala olan'ny fitondràna mba hamoretana amin'ny fomba tsimatimanota ny fitenenana anaty Aterineto fotsiny ihany indray io hetsipanentanana fanadiovana io.
Nanoratra ny mpampiasa Twitter, @WL Yeung, “Ny andro mialoha ny kongresy nasionaly faha18-n'ny antoko kaominista, hanenjana ny fifehezany ny fahalalahana miteny indray i Beijing amin'ny anaran'ny ‘fanoherana ny votoaty mamoafady’.” Nanoratra ny mpampiasa iray hafa, “Afaka manao firaisana ara-nofo amin'ireo vadikeliny, tsy misy bedy, ireo tomponandraikitra ambony anatin'ny antoko, nefa izahay na dia ny mikasikasika ny fitaovam-pananahanay aza tsy azonay atao.”
Nanomboka io “Hetsipanentanana anaty Aterineto manohitra ny Votoaty Mamoafady” ireo masoivohon'ny governemanta isan'izany ny Birao Nasionaly Manohitra ireo Famoahana Votoaty Mamoafady sy Mandika Lalàna, ny Biraom-panjakana momba ny Fampahalalàna ao amin'ny Aterineto, ny Minisitry ny Indostria sy ny Ministry ny Filaminam-bahoaka tamin'ny Aprily 2014 — antenaina haharitra hatramin'ny Novambra 2014 izy io. Mandray anjara mavitrika anatin'io hetsipanentanana io ny mediam-panjakana lehibe rehetra, manoratra fanehoankevitra manakiana ary mamoaka tatitra manokana momba ilay raharaha.
Nanome sosokevitra hametrahana “Rafitra Fizaràna ny Lisitra Mainty misy ireo Votoaty Vetaveta” mihitsy aza ny China's Internet Society, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, izay neken'ireo mpandraharaha tambajotra lehibe sy ireo orinasa mpamatsy Aterineto, isan'izany ny Thunder, Qihoo 360, Baidu, ary ny China Telecom, ankoatra ireo hafa. Ny mampihomehy, nilaza ihany koa ny Sina fa mety hanohana ilay sosokevitra.
Tsy io no voalohany amin'ny hetsipanentanana ‘manohitra ny votoaty mamoafady’ ataon'ny Antoko Kaominista Sinoa io. Tamin'ny 2012, nakaton'ny Birao Nasionaly Manohitra ireo Famoahana Votoaty Mamoafady sy Mandika Lalàna ao amin'ny Birao misahana ny Raharaha Ara-kolontsain'i Beijing ny Economic Observer, izay efa am-polo taona no teo amin'ny sehatr'io asa io, noho ny fiampangàna azy ho “namoaka ivelan'ny faritra voasoratra,” taorian'ny namoahan'ilay gazety andianà tatitra fanadihadiana momba ny tondradrano tao Beijing. Nandritra izany fotoana izany, nanao herim-pamoretana mavitrika tamin'ireo “Tibetana mpampisara-bazana” izay nanao famoahana sy fanaparitahana votoaty ihany koa ny CPP tamin'ny alalan'ny fametrahana rafitra fanivanana ireo lahatsoratra Tibetana eo ambanin'ny rakotra “fanoherana ny votoaty mamoafady”, mba “hametrahana rafitra feno ho fisorohana sy manohitra ny fidirana mangingina mandrakotra ny tany, ny habakabaka ary ny tontolon'ny aterinerto.”